काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ७ सय ५५ कोरोना संक्रमित, ६ जनाको मृत्यु « Postpati – News For All
असोज ८, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाबाट ६ जनाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौंमा तीन पुरुषसहित चारजना, भक्तपुरमा एक महिला र एक पुरुष गरी ६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै उपत्यकामा ७५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ७५५ जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौंका ६०९, भक्तपुरका ५१ र ललितपुरका ९५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत उपत्यकाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा कोरोनाको ग्राफ दिनप्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ। संक्रमितको संख्या करिब ७० हजार नजिक पुग्नै लागेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित संक्रमितको संख्या ६९ हजार ३०१ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
१८ हजार ४३७ कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा ८ हजार ६१४ जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा ९८२३ जना छन्। यस्तै क्वारेन्टाइनमा ६ हजार ५६५ जना रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा २४ घन्टामा ११ हजार ४४९ पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ४५७ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। यो ७२ दशमलव ७ प्रतिशत हो। योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५० हजार ४११ पुगेको छ।
आइसीयूमा २३२ र भेन्टिलेटरमा २८ जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म ४५३ जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार मात्रै १७ जनाको मृत्यु भएको छ।
२०७७ आश्विन ८,बिहीबार को दिन प्रकाशित
दाङका एक कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु